Mourinho Oo Kula Soo Biiray Klopp Iyo Valverde Loolanka Loogu Jiro Saxiixa Difaaca Kooxda Sevilla – Gool FM
Mourinho Oo Kula Soo Biiray Klopp Iyo Valverde Loolanka Loogu Jiro Saxiixa Difaaca Kooxda Sevilla
Dajiye April 22, 2018
(Premier League) 22 April 2018 Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa dalbaday saxiixa difaaca Sevilla Clement Lenglet, sida ay qortay saxaafada gudaha dalka Spain.
Waxaa jira warar xiiso leh ee ka imaanaya kooxaha Barcelona iyo Liverpool si ay ula saxiixdaan daafaca kooxda Sevilla Clement Lenglet.
Barcelona ayaa bilowday inay raadiso bedelka difaaca xulka qaranka France Samuel Umtiti, kaasoo aan wax heshiis ah u saxiixin kooxda ka dhisan gobolka Catalonia.
Wargeyska Spanisha ah ee “Don Balón” ayaa horey u sheegay in Barcelona ay soo bandhigtay liiska xidigaha ay dooneyso si ay kaga dhigato badalka Umtiti oo la filayo inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League.
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxay isha ku hayaan qaab ciyaareedka xidiga kooxda Sevilla Clement Lenglet si ay gacanta ugu dhigaan saxiixiisa.
Barcelona ayaa diyaar la ah in ay bixiso aduun lacageed dhan 30 million euro, si Clement Lenglet uu u yimaado garoonka Cump Nou, qiimahan ayaana ah kan lagu kansali karo heshiiska uu ku joogo kooxdiisa.
Daafaca Faransiiska ah ee Clement Lenglet ayaa kasoo muuqday Sevilla 39 kulan tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Nancy bishii Janaayo ee sanadkii hore 2017.
Wenger oo iska fogeeyay inuu ku lug leeyahay doorashada tababaraha badali doona